ထိုးဆေး အဝါရောင် Trenbolone Finaplix Tren Acetate CAS 10161-34-9 Trenbolone Acetate ထိုးဆေး Tren A အမှုန့်
ဖော်ပြချက်-Yellow Crystalline Powder
တင်ပို့မှု-EMS၊ EUB၊ HKEMS၊ Fedex၊ TNT
အလင်းတန်း-tren ကိုယ်ကာယတည်ဆောက်မှု ဖြည့်စွက်စာ၊ tren ကြွက်သားဖြည့်စွက်စာ
Trenbolone Acetate (Tren Acetate)အမြန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန်အမည်- Trenbolone Acetate
အခြားအမည်- Finaplix;Trenbolone Ace;Tren Acetate;Tren ace
Trenbolone Acetate မော်လီကျူးဖော်မြူလာ- C20H24O3
Trenbolone Acetate မော်လီကျူးအလေးချိန်- 312.4
Trenbolone Acetate အသွင်အပြင်- အဖြူရောင်မှ အဝါဖျော့ပုံဆောင်ခဲမှုန့်
ပက်ကေ့ချ်- လက်ရာမြောက်ပြီး ဖောက်သည်များလိုအပ်ချက်အရ လုပ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ဘေးကင်းပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ရုပ်ဖျက်ထားသော ပက်ကေ့ခ်ျကို အာမခံနိုင်ပါသည်။
Trenbolone Acetate စစ်ဆေးမှု- 99%
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- ISO 9001၊ USP
ပို့ဆောင်မှုနည်းလမ်း- EMS၊ HKEMS၊ DHL၊ TNT၊ Fedex၊ UPS... (အမြန်ဆုံးနှင့် သင့်စိတ်ကြိုက်ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်)
Trenbolone Acetate (Tren Acetate)သုံးသပ်ချက်များ
Trenbolone သည် စျေးကွက်တွင် အကောင်းမွန်ဆုံးသော အကျိုးရှိဆုံး anabolic steroids များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်ကို သံသယ မရှိပါ။Nandrolone ၏ ကုထုံးဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများ သို့မဟုတ် Testosterone ပင်လျှင် ၎င်းသည် လိုက်ဖက်ညီမည်မဟုတ်သော်လည်း ကုန်ကြမ်းပါဝါနှင့် ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် အသွင်ပြောင်းမှုအပေါ် အခြေခံ၍ Trenbolone Acetate သည် ဘုရင်ဖြစ်သည်။ဖြတ်တောက်ရာတွင်၊ အနီးကပ်ပင်မဟုတ်ပဲ စတီးရွိုက်သည် မည်သည့်အတွက်မျှ အကျိုးရှိမည်မဟုတ်ပါ၊ နှင့် တုံးလိုက်သောအခါတွင် ၎င်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်သည်မဟုတ်ပါ။
Tren သည် ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ထူထပ်သော အဆင့်များအတွင်း အကျိုးရှိသော်လည်း အဆင့်တစ်ခုတွင်သာ အသုံးပြုမည်ဆိုပါက ဖြတ်တောက်ခြင်းကို အမြဲရွေးချယ်ပါ။အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ တင်းမာမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါ အချို့အမျိုးသားများတွင် ဒြပ်ပေါင်း၏ ကြမ်းတမ်းမှုကြောင့် လူများစွာသည် ၎င်းတို့၏ Trenbolone Acetate အသုံးပြုမှုကို အဆင့်တစ်ခုသို့ ကန့်သတ်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။သို့သော်၊ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သော ခိုင်မာသောတုံ့ပြန်သူများသည် အဆင့်နှစ်ခုစလုံးတွင် အောင်မြင်မှုအဆင့်ဖြင့် စတီးရွိုက်ကို အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိသင့်သည်။
Trenbolone Acetate (Tren Acetate)ရရှိနိုင်မှု
Trenbolone Acetate ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ရရှိနိုင်ပြီး ရရှိရန် အလွယ်ကူဆုံး anabolic steroids များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းတိုင်းနီးပါးသည် ဤစတီရွိုက်ကို ထုတ်လုပ်သည်။Testosterone မှလွဲ၍ ၎င်းသည် မည်သည့် စတီးရွိုက်များထက် ဝယ်လိုအား မြင့်မားနေနိုင်သည်၊ အများအပြားက ၎င်းကို ပြုလုပ်ပြီး ထောက်ပံ့မှုသည် အလွန်မြင့်မားသောကြောင့်၊ ၎င်းသည် အလွန်တတ်နိုင်သော anabolic steroid ဖြစ်သင့်သည်။
အရေးကြီးသောမှတ်ချက်- Tren အခြေပြု gynecomastia သည် prolactin များစုပုံခြင်းကြောင့်ဟု နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် ယူဆခဲ့သည်။သို့သော်လည်း William Llewellyn ၏အလုပ်ကြောင့် မှားယွင်းကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။အမှန်မှာ၊ ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး သူ၏လေ့လာမှုသည် အကျုံးဝင်ပါသည်။၎င်းသည် ပရိုဂျက်စတင်၏ သဘာဝ၊ prolactin ကိုဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။Llewellyn သည် Trenbolone နှင့် aromatizing steroids များကိုအသုံးပြုခြင်းသည် gynecomastia ၏မသာမယာများကိုများစွာတိုးစေပြီး estrogen ဆန့်ကျင်ဆေးကိုမကြာခဏအသုံးပြုခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း Llewellyn မှမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
Trenbolone Acetate (Tren Acetate)နှင့်
သက်သေခံခြင်း။ လိုက်လျောညီထွေ လိုက်လျောညီထွေ
စုပ်ယူမှု ≤0.30% လိုက်လျောညီထွေ
အတိအကျလှည့် +39°~ +43° +39.5°
Chromatography သန့်ရှင်းမှု လိုက်လျောညီထွေ လိုက်လျောညီထွေ
အော်ဂဲနစ် မတည်ငြိမ်သော အညစ်အကြေးများ လိုက်လျောညီထွေ လိုက်လျောညီထွေ
အခြောက်ခံခြင်းတွင် ဆုံးရှုံးမှု ≤0.50% 0.32%
မီးကြွင်းကျန် ≤0.10% 0.01%
ဆန်းစစ်ချက် 97~101% 99.02%
နိဂုံး USP31 စံနှုန်းဖြင့် ကိုက်ညီခြင်း။
1. ကျွန်ုပ်တို့တွင် စတော့ရှိသောကြောင့် ငွေပေးချေမှုကို လက်ခံရရှိသည့်နေ့တွင် အမြန်ပို့ဆောင်နိုင်ပါသည်။
2. အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း၊ ပထမတန်းစားဝန်ဆောင်မှု၊ မြင့်မားသောအောင်မြင်သောပေးပို့မှုနှုန်း။မှာယူမှုကြီးကြီးမားမားပြုလုပ်သည့်အခါ လျှော့စျေးပေးပါမည်။
3. အရည်အသွေးမြင့် အာမခံပါသည်၊ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာတွေ့ရှိပါက၊ ပက်ကေ့ချ်ကို သင့်အတွက် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးပါမည်။
4. အမြန် (FedEx၊ UPS၊ DHL၊ EMS TNT HKEMS)၊ လေကြောင်းဖြင့် ပို့ဆောင်ခြင်း။ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရှိဆုံး ပေးပို့သူအား သင့်အတွက် အကြံပြုထားသည်။
5. သင့်အတွက် 24/7 နွေးထွေးသောရောင်းအားပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှု။သင့်မေးခွန်းတိုင်းကို တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးပါမည်။ customer ၏ ပထမဆုံးယုံကြည်မှုနိယာမကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးနှင့် အရိုးသားဆုံး ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ပါမည်။
1) စံသတ်မှတ်ချက်- USP စံနှုန်း
2) သန့်ရှင်းမှု ≥ 99%
3) ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကို စက်ရုံစျေးနှုန်းဖြင့် ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
2၊ လျင်မြန်ပြီး ဘေးကင်းသော ပို့ဆောင်မှု
1) ငွေပေးချေပြီး 24 နာရီအတွင်း ပါဆယ်ထုပ်များကို ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ခြေရာခံနံပါတ် ရနိုင်ပါသည်။
2) လုံခြုံပြီး သတိရှိစွာ ပို့ဆောင်ခြင်း။သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းအမျိုးမျိုး။
3) အကောက်ခွန်ဖြတ်သန်းနှုန်း ≥99%
4) ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို အလွန်လျင်မြန်ပြီး ဘေးကင်းစွာ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သော ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အေးဂျင့်/စာပို့သူ/ဖြန့်ဖြူးသူရှိပါသည်၊ လွှဲပြောင်းရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် စတော့ခ်ရှိပါသည်။
3၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဖောက်သည်များရှိသည်။
1) ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ကြွယ်ဝသော အတွေ့အကြုံများသည် ဖောက်သည်များအား သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည်၊ လုံလောက်သောစတော့ခ်နှင့် အမြန်ပို့ဆောင်မှုတို့သည် ၎င်းတို့၏ဆန္ဒကို ပြည့်မီစေသည်။
2) စျေးကွက်တုံ့ပြန်ချက်နှင့် ကုန်ပစ္စည်းတုံ့ပြန်ချက်များကို တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်၊ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်ကို ပြည့်မီရန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ဖြစ်သည်။
3) အရည်အသွေးမြင့်၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်း၊ လျင်မြန်စွာပေးပို့မှု၊ ပထမတန်းစားဝန်ဆောင်မှုသည်ဖောက်သည်များ၏ယုံကြည်မှုနှင့်ချီးမွမ်းမှုကိုရရှိစေသည်။
ယခင်- အဝါရောင် Anabolic Powder Tren Anabolic Steroid Trenbolone Acetate Cycle for Bodybuilding Tren A CasNO.10161-34-9
နောက်တစ်ခု: အဆီဆုံးရှုံးမှု Androgenic Tren A Anabolic Steroids ကာယဗလ ဖြတ်တောက်ခြင်း သံသရာ Trenbolone Acetate Powder CasNO.10161-34-9
Androgenic Steroidal ဟော်မုန်း
ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်း Steroid Powder
Steroid Powder ဟော်မုန်း
Tren Acetate Powder ၊
99.9% High Purity Trembolones Acetates အဝါရောင် S...
Trenb အဝါရောင် Trenbolone Acetate ကုန်ကြမ်း Steroids Po...
Trenbolone Acetate ကုန်ကြမ်း Steroids အမှုန့် Tren A ...
99% သန့်ရှင်းစင်ကြယ် Steroid ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းအမှုန့်စမ်းသပ်မှု Pro ...
သတိပညာဖြင့်ထုပ်ပိုးခြင်း Trenbolone Acetate Steroids Tr...
99% သန့်ရှင်းမှု Trenbolone Acetate 50 Steroid MENT5...
Trenbolone Acetate 100mg/ml Anabolic ထိုးသွင်းခြင်း...
Trenbolone Acetate အကြိုရောစပ် ထိုးဆေး Anaboli...
99% သန့်ရှင်းမှု Trenbolone Acetate အမှုန့် Tren Aceta...
Trenbolone Acetate ထိုးဆေး အဝါရောင် Trenbolone...
Trenbolone Acetate Androgenic Anabolic Steroids...
အဝါရောင် Anabolic အမှုန့် Tren Anabolic Steroid Tr...
အဝါရောင် Trenbolone Finaplix Tren Acet ထိုးဆေး...